DAAWO: Wararkii ugu dambeeyey Jubbaland, Axmed Madoobe miyey is qabteen Wasiirka Amniga?
KISMAAYO(P-TIMES) – Xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya kulamo siyaasadeed oo saacadihii ugu dambeeyey ka socday magaalada Kismaayo, kuwaas oo ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland, iyadoo ay jiraan tabashooyin kala duwan.
Xildhibaanada cusub oo lafilayey in la shaaciyo maanta ayaa guuldareystay, waxaana wararku sheegayaan in uu wali jiro is maandhaaf u dhaxeeya golaha Wasiiradda qaarkood iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ku wajahan kuraasta beelaha qaarkood.
Dooda ugu badan ayaa u dhaxaysa wasiiradda beesha Mareexaan oo sheegaya in kuraasta beeshooda si gaar ah ay guddigu u maamusheen, waxaana xubnahaas ka mid ah kuxigeenkii guddiga doorashooyinka oo shalay baxsaday, aana la aqoon meel uu ku sugan yahay.
Warar hoose ayaa sheegaya in wasiiradda Amniga & Qorsheynta ee Jubbaland oo labaduba ka soo jeeda beesha Mareexaan ay diidan yihiin sida ay wax ku socdaan, gaar ahaana qaabka loo maamulay xubnaha baarlamaanka beeshooda.
HALKAN KA DAAWO JUBBALAND
Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinku, waxay sheegeen in cod hal-dheeri ah ay ku kala baxeen xubnaha guddiga marka ay ansixinayaan xubnaha baarlamaanka cusub, waxana wararku cadeynayaan in dhawaan la shaacin doono liiskan.
Majiro xog cadeynaysa ilaa hadda waxyaabaha hoose ee la gaaray, balse wararka ayaa sheegaya in Madaxtooyada Jubbaland ay xooga saarayso sidii meelmar looga dhigi lahaa in jadwalka doorashada aan marnaba dib looga dhicin oo lagu dhawaaqo liiska xubnaha cusub ee baarlamaank Jubbaland.